बलजफ्तीको भिडले दिने सन्देश ! - Jagaran Post सम्पादकीय
हामीलाई अपेक्षा थियो, आजको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बाट केहि यूटर्न लिनेछन। केहि महत्त्वपूर्ण निर्णयको घोषणा गर्नेछन। राजनैतिक दुष्चक्रमा फसेको देशले प्रधानमन्त्री को कतिपय घोषणाबाट राहतको महसुस गर्नेछ।
चर्चा गरिएझैं धेरैलाई आज प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको व्यग्र प्रतीक्षा थियो। माघ २३ गते प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बाट केहि नौलो कुरा बाहिर आऊनेछ, कतिपय राजनैतिक मुद्दाहरुले यूटर्न लिनेछ र देशले बिल्लुकै फरक गोरेटो पहिल्याऊनेछ।
मूलत: देशको लागि अत्यन्तै बोझ बनेको संघियता खारेजीको लागि आफू अग्रसर रहेको वाक्य ओलीको मुखबाट फुत्किन्छ कि भन्ने आशले मात्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आजको लाईव भाषण हेर्ने र सुन्ने धेरै देखिएका, नत्र आम स्वतन्त्र नागरिकले नेपालका कुनै पनि नेताको भाषण सुन्ने जाँगर चलाएको देखिंदैन। अझ मूलत: पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेता भनाऊंदाहरुका भाषणले त नागरिक आजित भैसकेका छन।
स्वतन्त्र नागरिकले चाहेको भनेकै परिवर्तन, सुशाषन, बिकाश र भ्रष्टाचारमुक्त देश नै हो । गुणस्तरीय एवं सर्वसूलभ स्वास्थ्य तथा शिक्षा, स्वरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, बिभेदमुक्त समाज तथा आम नागरिकको जिवनस्तरको स्तरोन्नती नै हो।
मूलधारका भनिएका अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरवहादूर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईलगायत मधेसवादी दलका पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताका भाषणमा कहिल्ल्यै पनि विश्वस्त हुनसकिने अवस्था आएन किनकि यिनिहरुका भाषणमा सृजनशिलता छैन, दूरदृष्टि छैन। मात्र सत्ताको झिनाझप्टिका कपटी खेल र व्यवहार मात्र लाग्दछ।
हिजो कथित नेपाल बन्दको आव्हान गरे, मारमा आम नागरिक नै परे। प्रचण्ड तमाम सुरक्षाकर्मीका साथ डेढ/दुई करोडको गाडीमा सयर गर्दाभए। बन्दको आव्हान हाम्रो रहर हैन, बाध्यता हो भन्दै उहीँ पुरानै कान पाक्ने रटान नेताहरुले लगाईरहे, नोक्सानमा जनता परे।
आज कत्ति न के के हुने हो भनेर गाऊँ गाऊँबाट मान्छे उठाएर ल्याएर काठमाण्डौमा तमासा देखाईयो। काठमाण्डौको जनजिवन अतब्यस्त पारियो, अन्त्यमा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएर गयो। धन्न यत्तिको अस्तब्यस्तताको लागि मुखैले सहि, प्रधानमन्त्री माफीसम्म माग्न भ्याए, सास्तीको आंकलन तिनिहरुको ल्याकतले भेट्दैन पनि।
आखिर के का लागि मान्छे ओसारियो र किन आऊँछन जनता यस्ता सभाहरुमा? अचम्म लाग्दछ। जहाँ जनता यतिविघ्न वेरोजगारी भई कहिले कसको सभामा त कहिले कसको सभामा गएर दिन बिताऊनुपरेको छ, त्यहिं सभाबाट नेताले नेपालमा बेरोजगारीका दिन गए भनेर भाषण गर्दैगर्दा सभामा उपस्थित तिनै बेरोजगारबाट तरर ताली पड्किन्छ, नेता अझै हौसिंदै जान्छन।
एकअर्कालाई लान्छना लगाऊन, गाली गलौज गर्न, आफ्नो दम्भ, अहंमता र शक्ति प्रदर्शन गर्नकै लागि जम्मा गरिने यस्ता भिडमध्ये अधिकांशलाई त राजनिति भनेको के- हो भन्नेसम्मको ज्ञात हुंदोरहेनछ। देशभरका बेरोजगार युवाहरु जम्मा पारेर, थोरै खानेपिऊने ब्यवस्था गरिदिएर २/४ भाषण ठोकेर अन्तत: कडा सुरक्षाका माझ महंगो गाडी चढेर नेता बेपत्ता रहन्छन, जनता अलपत्र परिरहन्छन। यस्तो भिड जम्मा गरेर नेताले कस्तोखालको सन्देश दिन खोजेका हुन? कुन आत्मरतिमा रमाऊन खोजेका हुन?
यौटा असल नेताको लागी उसले आफ्ना कुराहरु राख्नकै लागी यसरि जवर्जस्ती भिड जम्मा गर्नु नै पर्दैन। उसको लागि जनता आफै जम्मा भैदिन्छन। गैरराजनैतिक वृत्तबाट उदाहरण नै पेश गर्ने हो भने पत्रकार रवि लामिछानेलाई हेर्दा हुन्छ, कुलमान घिसिङ्गलाई हेर्दा हुन्छ। डा. गोविन्द के.सी.लाई हेर्दा हुन्छ। उनीहरुको समर्थनमा कहिल्यै जनतालाई उपस्थित हुन उर्दी जारी गर्नुपर्दैन। जनता स्वतस्फूर्त जम्मा हुन्छन र समर्थन गर्दछन। उनीहरुले कहिल्यै पनि उनीहरुको समर्थनमा यति लाख मान्छे उतार्छौं र देखाईदिन्छौं भनेर घूर्की पनि लगाऊनुपर्दैन। स्वतस्फूर्त उनीहरु समस्यामा पर्दा या अन्यायमा पर्दा जनता सडकमा आईदिन्छन। कुलमान घिसिङ्गको पदावधि थप्ने कुरामा होस या रवी लामिछानेको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्धामा नै किन नहोस, या डा. गोविन्द के.सी.को सत्याग्रहको सवालमा किन नहोस? के जनता उनीहरुको पक्षमा स्वतस्फूर्त रुपमा सडकमा आएका हैनन र? उनीहरुले के जनता सडकमा आएर तमासा देखाऊन आव्हान गरेका हुन र? गर्नु नै पर्दैन, किनकी यिनिहरुले जनपक्षीय कार्य गर्दै आएका छन। आवाजविहिनका आवाज बुलन्द पार्दै आएका छन।
आखिर जनसमर्थन र स्नेह प्राप्त गर्न त जनप्रीय नै हुनुपर्दोरहेछ नि, हैन र? बसका बस मान्छे ओसारेर, मोटरसाईकलमा तेल भरिदिने आश्वासन देखाएर, भोका जनतालाई मासुभातको लालच देखाएर गरिने सभासम्मेलनको औचित्य के? अर्थ के र सन्देश के? आज यता आएर भिड बनाएका जनता भोलि उता पनि त जान्छन। उता पनि गएर मोटरसाइकलमा तेल भर्छन, मासुभात खान्छन र घर फर्किन्छन।
राजनैतिक ईतिहास, आदर्श, बिकाश र शक्तिको कुरा गर्दा हामीले किन बिदेशका नेताहरुको उदाहरण लिन्छौं? किन आफ्नै देशभित्रका नेताको चर्चा उदाहरणको रुपमा हुँदैन त? किन हामीलाई आफ्नो समर्थनमा जवर्जस्ती र बलजफ्ती भिड जम्मा गर्नुपरिराखेको छ त? किन हाम्रो पक्षमा स्वतस्फूर्त जनता जम्मा भैदिन्नन त? किन स्वतन्त्र नागरिकले हाम्रो प्रशंसा गरिदिंदैन? मिडियाले किन लेख्दैनन त भन्दा कमजोरी हामीसंगै छ, गल्ती हामीले नै गरेका छौं भनेर नेताहरुले आत्मालोचना गर्ने चाहिँ कहिले?
हिंजोको नेपाल बन्दले उपलब्धि के हासिल भयो? आजको प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन ले देशको लागी के सम्बोधन गर्यो? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बोधन गर्यो? सुशासनका लागि सम्बोधन गर्यो? महंगी नियन्त्रणका लागि सम्बोधन गर्यो? कालोबजार र तस्करी नियन्त्रणका लागि सम्बोधन गर्यो? गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि सम्बोधन गर्यो? सामाजिक सुरक्षा र बढ्दो बेरोजगारीका लागि सम्बोधन गर्यो? टाट पल्टिएको देशको आर्थिक दुरावस्थाको बारेमा सम्बोधन गर्यो या कृषिमा आत्मनिर्भरताको लागि सम्बोधन गर्यो? प्रधानमन्त्रीजस्तो ब्याक्तिले यत्रो तामझामसहित गरेको सम्बोधनमा त यी कुराहरु समेटिनुपर्ने थियो नि होइन र?
मात्र राजनैतिक कुण्ठा, तुच्छता, अहंमता, आडम्वरता, पूर्वाग्रह, छलकपट र झुठको वर्षा बर्षाऊनको लागीमात्र गरिने यस्ता सभासम्मेलन र भाषणले मुलुक कहिं पुग्दैन। मुलुकले निकाश पाऊँदैन। देश झनै राजनैतिक अराजकताको सिकार बन्दछ। नेतृत्वको विश्वसनीयतामा झनै ह्रास आऊंदै जान्छ भने युवावर्गमा निरासा र पलायन मानशिकता बाहेक अर्थोक केहि हुनेछैन। नेताहरु आफ्नै समुन्नतीको आत्मरतिमा रमाऊँदै जानेछन भने जनता पलायन हुँदै जानेछन। अन्त्यमा हुने भनेको देशको बर्बादी नै हो।
यो पनि पढ्नुहोस् – बालअधिकारको ग्यारेण्टी गर